Golaha Amaanka oo raba in Soomaaliya yeelato hogaan siyaasadeed oo mideysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa hoosta xariiqay muhiimada ay leedahay hoggaan siyaadadeed oo mideysan iyadoo golahu uu walaac ka muujiyay saameynta ay xiisadaha siyaasadeed ay ku yeelan karaan horumarka laga garaay nabada iyo deganaanshaha Somaaliya.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa booqshadoodii Somalia warbixin ka siiyay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon, iyagoo ku baaqay in ay muhiim tahay in hoggaanka Soomaaliya ay noqdaan kuwo wada-shaqeyn ay ka dhexeyso. Sidoo kale xubnaha ayaa walaac ka muujiyay xaaladaha ka taagan Soomaalia, gaar ahaan xasillooni la’aanta siyaasadeed.
Sidoo kale, xubnaha 15-ka ah ayaa soo dhaweeyay go’aankii dhawaan uu ku xalliyay golaha baarlamaanka Soomaaliya xiisadihii siyaadeed ee taagnaa. Waxayna ammaan u jeediyeen ra’iisul wasaarihii kalsoonida lagala laabtay taasoo ku aaddan ogolaashihii uu ogolaaday natiijada iyo baaqsiissii ahaa in khilaafka lagu bedelo wada-shaqeyn.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa ku celiyay go’aankooda ay taageerayaan hirgalinta aragtida 2016-ka ee ah inay dalka doorasho ka dhacdo. Waxayna intaa raaciyeen inay muhiim tahay in madaxweynuhu uu si dhaqso ah u soo magacaabo ra’iisul wasaare cusub.
Xubnaha Golaha Ammaanka waxay dalbadeen in si dhaqso ah loo hagaajiyo xiisadaha siyaasadeed ee kusoo laalaabtay dowladda Soomaaliya, lana sii wado howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab si loogu guuleysto aragtida soo aaddan ee 2016-ka.
Agaasimhii wasaaradda haweenka Soomaaliya oo la ogaaday halkii uu ku dambeeyey